Dhaqan - Howling Pixel
Aasiya (Eeshiya Af-Ingiriis: Asia; Af-Carabi: آسيا; /ə[unsupported input]ˈeɪʃə/) waa qaarada ugu weyn Dhulka iyo tan ugu dadka badan leh, taasi oo dhacda meel u dhaxaysa dhamaan qaaradaha kale ee dhulka. Qaarada Aasiya waxay ku fadhidaa dhul baaxadiisu le'eg tahay 44,579,000 square kilometres (17,212,000 sq mi), taasi oo u dhiganta ilaa 30% dhulka Dunidan iyo 8.7% oogada sare ee meerahan. Intaas waxaa dheer, qaaradan waxaa ku dhaqan shacabka ugu badan ee aduunka taasi oo gaadhsan 4.4 bilyan (labada wadan ee ugu dadka badan waa Hindiya iyo Shiinaha). Waxaa xusid mudan iyadna in qaarada Aasiya ay ka dhismeen boqortooyooyinka ugu horeeyay ee aadamuhu sameeyaan.
Af Soomaali (Af-Ingiriis: Somali Language; Af-Carabi: لغة صومالية) waa luuqad lagaga hadlo wadanada Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, Jabuuti, dhulka ay Itoobiya gumaysato iyo dhulka kiinya gumaysato meelo oo aduunka ka mid ah.
Luuqada Af Soomaaligu waxay ka mid tahay luuqadaha kushiitiga loo yaqaan ee lagaga hadlo bariga iyo badhtamaha Afrika, iyo meelo ka mid ah qaarada Aasiya.
Qaarada Afrika waxaa ku hareersan biyo; Bada Mediterraniyanka waxay ka xigta waqooyi, sidoo kale Gacanka Suweys iyo Bada Cas waxay ka xigaan waqooyibari, Badweynta Hindiya ayaa kaga taala koonfurbari, iyo Badweynta Atlantika oo ka xigta galbeed. Intaas waxaa dheer, wadanka jasiirada Madagaskar iyo gasiirado kale ayaa soo hoosgala qaarada. Sida rasmiga ah waxaa qaarada Afrika degan 54 wadan oo la aqoonsan yahay, sagaal deegaan iyo labo wadan oo wali la aqoonsan.Xaga bulshada, qaarada Afrika waxaa ku dhaqan dadka ugu da'da yar caalamka marka tirada guud laga hadlayo; 50% dadka Afrikaanka ahi waa da'da ka yar 19 sano.
Juquraafi ahaan, wadanka Aljeeriya ayaa ugu wayn dhulka iyo baaxada, halka Nayjeeriya ugu dad badan tahay; waxaana guud ahaan caalamka la isku raacay in badhtamaha iyo Bariga Afrika yihiin meesha aadamuhu ka soo beermeer markii ugu horeeysay. Waxaa deegaanadan laga helay lafo aad u da' weyn oo muujinaya horaantii dadka. Tusaale ahaan, wadanka Itoobiya waxaa laga helay lafaha ugu da'da weyn inta la ogyahay midaasi oo jirta 200,000 kun sano.
Guud ahaan qaarada Afrika waxaa dhex mara dhulbadhaha, waxayna leedahay noocyo badan oo cimilo kala gedisan ah. Waana qaarada keli ah ee laga helo astaamaha cimilada waqooyi ilaa koonfurta dhulka.
Sidoo kale, qaarada Afrika waxaa loo qeybiyaa shan gobol kuwaasi oo ku salaysan juquraafiga deegaanka. Waxay kala yihiin: Bariga Afrika, Badhtamaha Afrika, Waqooyiga Afrika, Galbeedka Afrika iyo Koonfurta Afrika.
Ciraaq (Af-Carabi العراق ama jamhuuriyadda Ciraaq, Af-Carabi, جمهورية العراق . waa wadan ku yaalo Bariga Dhexe ama galbeedka Aasiya. Ciraaq waxee xuduud la leedahay, wadamada Urdun,Suuriya, Turki, Iiraan,Kuweyt iyo Sacuudi Carabiya.
Ciraaq waa xubin muhiim ah oo ka tirsan Qaramada Midoobay iyo sidoo kale Jaamacadda Carabta, OIC, dhaqdhaqaaqa aan tooska ahayn iyo IMF. Waa Jamhuuriyad Federaali ah oo ka kooban 19 gobol (gobollo) iyo hal gobo gobol (Ciraaq). Diinta rasmiga ah ee dalka waa Islaamka. Dhaqan ahaan, Ciraaq wuxuu leeyahay hanti aad u taajirsan, wuxuuna u dabaaldegayaa guulihii hore ee xilliyadii hore ee Islaamka, waxaana loo yaqaanaa gabayaaga. Sawir gacmeedka iyo sawirqaadayaashu waxay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan caalamka Carabta, qaar ka mid ah waxay yihiin heer caalami ah iyo sidoo kale soo saarista farsamooyin qurux badan, oo ay ku jiraan roodhadhka iyo roogaga.
Dad (Af-Ingiriis: people; Af-Carabi: شعب) waa wadarta qof. Sidoo kale dad waa tiro badan oo shakhsiyaad ah kuwaasi oo noqon kara qabiil, bulsho, qoomiyad iyo wixii la mid ah.
Dunida maanta waxaa ku nool dad ka badan 7 bilyan oo qof; kuwaasi oo ku kala nool qaaradaha dunida. Inkastoo bani aadam la isku yahay, hadana dadka dunida ku nool waxay leeyihiin midabo iyo qaabdhismeed xoogaa kala duwan taasi oo ku xidhan cimilada, deegaanka iyo nolosha shakhsigaas ama dadkaasi. Noocyada kala duwan ee dadka waxaa ka mid ah:
Dadka Cowlan (yellow people) - asal ahaan ka soo jeeda qaarada Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo Koonfur Ameerika, waxaa ka mid ah "Hindida Cas", "Shiinaha" iyo wixii la mid ah.Arrimaha ugu weyn oo heysata dadka waa shaqo iyo waxbarashada. Dadka lumo marmar waxay uu jeestaan balwad.
Dhismaha Soomaaliya (Af-Ingiriis: Somali architecture) waa nashqada, qurxinta, farshaxanka iyo guud ahaan habka dhismaha wax loo dhiso aqalada, tiirarka, minaarada, iyo dhismayaasha magaalooyinka, caasimadaha, tuulooyinka iyo dhamaan meelo badan oo wadanka Soomaaliya ka mid ah.
Fanka Soomaalida (Af-Ingiriis: Music of Somalia; Af-Carabi: موسيقى صومالية) waa nidaamka, abuurida, qurxinta, habaynta iyo soo bandhiga heesaha Soomaalida, ruwaayadaha iyo majaajilooyinka u dhaqanka ah dadka Soomaalida ah meelkasta ooy joogaan, gaar ahaan inta ku dhaqan Bariga Afrika.
Guud ahaan, fanka Soomaalidu waa nooc ka mid ah Suugaanta Soomaalida. Sidoo kale, dadka ku hadla Af Soomaaliga waxay leeyihiin fan iyo suugaan aad u heersareeya, qani ku ah aqoon iyo xirfad qoto dheer. In kastoo fanka maanta jira yahay mid aad u da' yar wuxuu leeyahay waaxyo iyo noocyo aad u badan. Kuwaasi waxaa ka mid ah heesaha qaaciga, qaraamiga, heesaha jaaska, ruwaayadaha, majaajiloyinka, filimaanta, bandhigyada fanka, qoob-ka-ciyaarka iyo guud ahaan madadaalada ku baxda luuqada Soomaaliga.
Kani waa maqaal ku saabsan farshaxanka Soomaalida. Qoraalo kale fiiri farshaxan.Farshaxanka Soomaalida (Af-Ingiriis: Somali Art; Af-Carabi: فن صومال) waa farshaxanka dhaqan ee dadka Soomaalida ah; taasi ooy ka mid tahay sawirgacmeedka, shaxda, suugaanta, fanka, farshaxanta, habaynta iyo soo bandhiga heesaha Soomaalida, ruwaayadaha, majaajilooyinka u dhaqanka ah dadka Soomaalida ah meelkasta ooy joogaan, gaar ahaan inta ku dhaqan Bariga Afrika.
Ingiriiska (Af-Ingiriis: England; Af-Carabi: إنجلترا) waa gobolka ugu wayn Midowga boqortooyada Britan
Waxey xuduud la leedahay iskotland oo ay xaga waqooyi xuduud ka wadaagan, dhanka galbeedna waxa ay xuduud ka wadaagaan wels iyo bada Ireland goobta hada loo yaqaano ingiriisku waxa uu ka koobmay dhaqamo iyo qoomido badn waxana uu taariikh soo jireena leeyahay ilaa 35.000 oo sano laakiin marka la eego magaca ingiriis asal ahaan waxa uu kayimi mid kamida qabiiladihii dagay halkaas ee katagay wadamada waqooyiga yurub somali ahaana magacan marka lagu dhawaaqayo waxa uu noqon karaa (ingiriiska) ee maaha in la odhan karo ingiriis waayo taasi waxa ay sheegaysaa luqada ingiriisku waxa uu dawlad midaysan noqday sanadii 927 taariikhda miilaadiga xiligii horu marka iyo warshada oo bilaabmay qarnigii 15aad waxa uu ingiriisku caalamka ku yeeshy raad dhaqan iyo mid cilmi iyo mid shaqo oo aad u wayn luqada ingiriisaga sharciga ingiriiska oo ah mid maanta meelakasta laga isticmaalo waxa ay ka imaadeen wadanka ingiriiska daka kunool ingiriiska tiradoodu waa ilaa 51 milyon waa 84% dadka kunool boqortooyada midawday ama uk dawladan ingiriisku waxa ay lamidawday dhamaan boqortooyooyinka kale ee uk sanadii 1800 o ay la bexeen magaca Great Britain
Saynis (Af-Carabi: العلوم; Af-Taliyaani: Scienza; Af-Ingiriis: Science) waa wax kasta ee ku saabsan aqoon iyo dhaqan gelin
Saynis ku dhisan qeexitaan iyo ulajeeddo sida fiisikis
Shaleemo Soomaalida (Af-Ingiriis: Cinema of Somalia) waa shabakada soo bandhiga filimaanta, heesaha Soomaalida, ruwaayadaha iyo majaajilooyinka u dhaqanka ah dadka Soomaalida ah meelkasta ooy joogaan, gaar ahaan inta ku dhaqan Bariga Afrika. Shaleemo Soomaaligu waa waax ka mid ah Fanka Soomaalida.
Suugaanta Soomaalida (Af-Ingiriis: Somali literature) waa qeyb ka mid ah dhaqanka Soomaalida, gaar ahaan fanka iyo suugaanta u khaaska ah dadka Soomaalida ah meel kasta oo dunida kaga dhaqan yihiin. Suugaanta Soomaalida waxaa loo kala saaraa noocyo badan; kuwaasi waxaa ka mid ah gabayga, geeraarka, heesaha, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo noocyo badan oo kale.
Warbaahinta Soomaaliya (Af-Ingiriis: Media of Somalia) waa dhamaan aaladaha kala duwan ee loo isticmaalo warbaahinta iyo war-isgaadhsiinta wadanka Soomaaliya; kuwaasi waxaa ka mid ah idaacadaha raadiyowga, telefishanka, warbaahinta internetka iyo dhamaan noocyada kala duwan ee warbaahinta ka hoowlgasha wadanka Soomaaliya.
Sida lagu sheegay buugaag badan oo taariikhi ah, dadka Soomaalida ahi waxay tan iyo wakhtiyo hore ahaayeen kuwo ku safra badaha waaweyn ee caalamka, ayagoo u socdaalaya sababo kala duwan, sida ganacsi, aqoonraadis, dalxiis, iyo kuwo kale.